Astaamaha Na Eng
Q & A oo leh agaasimaha isgaarsiinta McKnight Na Eng ayaa asal ahaantii daabacay 5by 5 Design iyo halkan ku habboon fasax.
Muxuu yahay 'digital-first' macnaheedu yahay adiga iyo sababta ay muhiim u tahay?
Waxaa loo adeegsaday in ay noqdaan waaxda isgaarsiinta ee dhammaan kheyraadkooda ku bixiyay badeecad daabacan ka dibna waxay abuurtay nuqul pdf ah oo aan si sahlan u isticmaalin si ay ugu dhajiyaan webka mar dambe. Ama waxay soo saaraan nuxuro loogu talagalay goobaha dijitalka iyadoo la adeegsanayo naqshadeynta iyo qoraalka tafaftirka sida haddii ay ahayd daabacaad daabacan daabacan. Dijital-marka hore aniga iigu micnaheedu waa ka soo horjeeda hababkaas. Daabacaadda weli waxay leedahay hoygeeda, laakiin sii kordheysa, warbaahinada iyo ururada nooc kasta ah ayaa aqoonsanaya sida ay muhiimka u tahay inay xoogga saaraan meesha ay dhagaystayaashu ku qaataan inta badan saacadaha waking-ka. Sidaa daraadeed marka hore dijitaalka waxaa loola jeedaa abuurista dijitaal ah oo cusub oo qallafsan, wuxuu ka faa'iidaystaa dhamaan qalabkii ugu dambeeyay ee la heli karo, wuxuuna ka jawaabayaa caadooyinka aadka u horumaray iyo rajooyinka macaamiisha wararka casriga ah. Waxaa sidoo kale jira farsamooyin ku salaysan farsamooyinka iyo naqshadeynta wax soo saarka si loo soo saaro waxoogaa dijitaal ah oo ay u badan tahay in ay ku soo baxaan akhristayaasha waxayna ka caawiyaan inay hayso macluumaadka.
"Waxaa sii kordhaya, warbaahinnada warbaahinta iyo ururada nooc kasta ah waxay aqoonsanayaan sida ay muhiimka u tahay inay xoogga saaraan meesha ay dhagaystayaashu ku qaataan inta badan saacadaha ay soo jeedaan." -NA ENG, MASUULIYADAHA WADAJIRKA
Waa maxay casharrada muhiimka ah ee aad ka baratay?
Isku-duwayaasha danaha dadweynaha waxay u baahan yihiin in ay waqti go'an ka qaataan tamarta hal-abuurka ah iyo khayraadka ku saabsan qaybinta iyo wacyi-gelinta marka aynu samayno soo saaridda waxyaalaha hal-abuurka ah. Isku day inaad ku xoqdo gacanta hal gacan ah oo arag haddii aad maqashid dhawaaqyo. Waxaad guud ahaan u baahan tahay laba gacmood si aad u xirtid. Hase ahaatee marar badan, waxaynu ku bixinnaa dhammaan tamarta naga soo saaraysa qayb ka mid ah maadada, isla markiiba ka dib markaan soo dhajino, waxaan ku neefsaneynaa si aan u soo saarno qaybta dambe ee sheekada. Waa wakhti adag oo jaban marka dalabyada mawduucoodu ay aad u sareeyaan macaamiisha gudaha ama baahida loo qabo "quudinta bahalka" taas oo ah mashaariicda warbaahinta bulshada. Laakiin aniga ahaan, maaha kaliya qiimaha ay leedahay in la soo saaro wax kasta oo aan lahayn himil iyo dhagaystayaal maskaxda ku haysa marka la furayo. Marka la eego in dareenka aadanaha uu noqdo mid ka mid ah kheyraadka ba'an, iyo algorithms-ga warbaahinta ayaa si joogto ah isbeddelaya, midna kuma tiirsanaan karo wax-qabadka dabiiciga ah, waxay noqoneysaa mid aad muhiim u ah in lagu maal-galiyo ilaha istaraatiijiyada xeeladaysan ee bilawga ah.
Sidee ayaad u cabbiraysaa waxa shaqeynaya iyo waxa aan ahayn?
Xaqiiqdii waxaanu eegeynaa jaangooyooyinka ka qaybqaadashada sida qiimayaasha furan, muuqaalka bogga, riixista qiimaha, tirade dadka raacsan, saamiyada, iyo jecel yihiin, xitaa khariidadaha kuleylka ah ee naga caawiya inaan aragno inta ay dadku ku sii jiraan bogga internetka, laakiin mar walba waan had iyo jeer in badan oo xiiseynaya in ay ka kooban tahay dadka u gudbiyay tallaabo qoto dheer. Sidaa darteed, waxaan ognahay inaan guuleysanay haddii dadku si dhab ah u saxiixaan webinar ah oo aan kor u qaadnay, ama marka fikradda fikirka ah ay wada sheekeysi muhiim ah, ama markaan maqlo in sheeko uu u ogolaaday deeq bixiye kale inuu taageero urur ama ku biiro isbahaysiga. Had iyo jeer waan ka mahadcelinayaa fikradaha in khayraad aan bixinno ka caawinnay dadka kale in ay shaqadooda waxoogaa si dhaqsiyo ah u shaqeeyaan si sahlan iyo si sahlan sababta oo ah wadaagida gaarka ah, fikradaha la taaban karo ayaa si xawli leh u xawli kara kuna dhufan kara horumar Waa muraayad aad u sareysa, laakiin taasi waa waxa aan ku faraxsanahay oo waxaan dareemayaa inaan dareemayo isbedel. Falsafaddayda: Ujeedada natiijooyinka, ma aha oo keliya wax soo saarka.
Maxay yihiin isbeddellada cusub ama habdhaqanka ugu wanaagsan ee aad ku aragtay isgaadhsiinta dijital ah?
Waxaan si dhab ah u leexinaynaa sheeko badan oo muuqaal iyo mid bani-aadmi ah. Dhammaanteen waxaan si fiican u ogaanay in sawiradu ay noqon karaan kuwo aad u awood badan. Cilmi-baaristu waxay inoo sheegaysaa wakhti iyo waqti mar kale in dadku ay u badan tahay in ay u ekaadaan oo ay ku hayaan nuxur muuqaal ah heerarka aadka u sarreeya marka loo eego qoraalka keligood. Iyo maskaxdeenu noo fududaynay inay ka fakaraan sheekooyinka, oo aan ka hor imanayn tuubada dabka xaqiiqda kali ah. Sidaas awgeed, waxaan ku qaadannay wakhti dheer dhisidda xog-ururin muuqaal ah, waxaanan abuurnay boos cusub oo casriga ah. Molly Miles, oo qaatay doorkaas, waxay abuuraysaa kaararka sawirada, sawir qaadashada, iyo ficil-gelinta fiidiyo-yaryar oo loogu talagalay wadaagista bulshada, waxaanan aragnaa sida wax-qabad fiican. Waxay yihiin waxyaabo badan oo xiiso leh si ay u soo saaraan, iyo dhageystayaashu waxay doonayaan inay ku farxaan.
Waa maxay guulaha aad la kulantay?
Waxaan runtii ku faraxsanahay sida boggayaga internetka dib loo soo celiyay. Waxay ahayd culays culus intii geedi-socodkeenu nooga baahday in aan dib u eegno ku dhawaad qayb kasta oo ka mid ah boggayaga, waxaanad waydiisaneysaa in ay u adeegtay hawlgalkeenna. Mareeyahani miyuu ka turjumayaa cidda aan si sax ah u sheegno una sheekaysano sheekadeena si waxtar leh, miyuu u adeegayaa baahida booqdayaasheena? Sidoo kale waa inaan dib-u-eegis ku sameynaa nalka, waxqabadka, heerka helitaanka dadka curyaamiinta ah, iyo isticmaalka guud. Natiijooyinka ayaa ah goob cusub oo casri ah oo cusub oo la taaban karo oo leh sifooyin muuqda. Waxay isticmaashaa sawirro diirran oo sax ah, si ay dadka ugu soo jiidaan, iyo inay muujiyaan, maaha inay sheegaan. Haddii aad tagto Wararka & Fikradaha qayb ka mid ah goobta, waa wax aad u soo guuraya si aan u arko wejiyada dadkoo dhan oo matalaya shaqada McKnight iyo in ay si adag u shaqeeyaan si loo horumariyo bulshadeena. Kuwani waa saynisyahannada iyo beeralayda, ganacsatada iyo farshaxanka, hoggaamiyayaasha dhallinyarada iyo qabanqaabiyayaasha beesha. Waxaan dooneynay bog ah in dadka kale dhiiri geliyo-markaa markaan arkaan dhammaan wakiillada isbeddelka kala duwan oo aan maqlo sheekooyinkooda, waxaan dareemayaa inaan ku guuleysanay sababtoo ah sheekooyinkoodu aad ayay u dhiirigeliyaan.
Mawduuca: Isgaadhsiinta, General
Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah
Khayraadka Webka Janaayo 2019